GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Turkish Ukrainian
SITE N’AKA ONYE EDEMEDE TETA! NA SWEDEN
Kwa afọ, a na-enye ndị mmadụ ma ọ bụ òtù ndị kerewooro òkè dị ukwuu n’ịkwalite ọdịmma nke ihe a kpọrọ mmadụ n’ọtụtụ ụzọ, Ihe Nrite Nobel. Olee mgbe omenala a malitere, oleekwa otú o si metụta ọchịchọ a na-achọ udo ụwa?
ANA-EJIKỌTA aha ya na ịkwalite ọdịmma nke ihe a kpọrọ mmadụ, ma ọ kpakọbara nnukwu akụ̀ site n’ire ngwá agha. Ònye ka ọ bụ? Ọ bụ Alfred Bernhard Nobel, onye Sweden nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-emepụta mmiri ọgwụ. E towo Nobel maka mgbalị ndị o mere iji kwalite ọdịmma ndị mmadụ, ma a na-akpọkwa ya “onye ahịa ọnwụ.” N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na Nobel mepụtara ihe na-agbawa agbawa bụ́ dynamite, n’oge ndụ ya kwa, ọ bara nnọọ ọgaranya site n’imepụta na ire bọmbụ ndị na-akpa ajọ ike.
Otú ọ dị, mgbe Nobel nwụsịrị na 1896, a chọpụtara ihe dị ịtụnanya. Ékpé o kere kwuru ka e debe nde $9 iche ma jiri ọmụrụ nwa e nwetara na ya na-enye ndị rụzuru ihe ndị dị ịrịba àmà na physics, mmụta ọdịdị na mgbanwe ọnọdụ ihe, nkà mmụta ọgwụ, nkà edemede, na udo.
Na mbụ, o juru ọtụtụ ndị anya. N’ihi gịnị ka onye a ma ama n’ịkpụ bọmbụ ji nwee ọchịchọ siri ike inye ihe nrite maka ihe ọma ndị a rụzuru nakwa ọbụna udo e nwetara? Ụfọdụ ndị chere na akọ na uche Nobel mara ya ikpe n’ihi na ihe ndị na-agbawa agbawa ndị o ji oge ndụ ya nile rụọ kpatara ajọ mbibi. Otú ọ dị, ndị ọzọ bịara na-eche na Nobel anọwo na-arụ ọrụ maka udo eri oge ahụ nile. N’ezie, o yiri ka o kwere na ka ngwá agha na-adịwanye ize ndụ, agha ga-eyiwanye ihe na-agaghị adị. “Ikekwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe m ga-akwụsị agha ọbụna ngwa ngwa karịa ndị ome iwu unu,” ka a sịrị na ọ gwara otu onye edemede, na-ekwukwa, sị: “N’ụbọchị ìgwè ndị agha abụọ pụrụ ikpochapụrịta onwe ha n’otu ntabi anya, ma eleghị anya oké egwu ga-ejide mba nile mepere emepe, ha ga-ekposasị ndị agha ha.”
Amụma Nobel buru ò mezuru? Olee ihe ndị a mụtara n’ime narị afọ ahụ gafeworonụ kemgbe Nobel nwụsịrị?
“Ọ ga-amasị m imepụta ihe ma ọ bụ ígwè nwere nnọọ ike nke igbu ndị mmadụ n’ìgwè nke na agha agaghịzi ekwe ọlụlụ ruo mgbe ebighị ebi”—ALFRED BERNHARD NOBEL
[Ebe E Si Nweta Foto Ndi Dị na peeji 3]
Peeji nke 2: Mgbọ ogbunìgwè: Foto Ndị Agha Ụgbọ Mmiri U.S.; ụlọ dakasịrị adakasị: UN PHOTO 158178/J. Isaac; peeji nke 3: Nobel: © Nobelstiftelsen